Cadaallad ma heli doonaan dhibbanayaashii Jeel Ogaadeen? - BBC News Somali
Cadaallad ma heli doonaan dhibbanayaashii Jeel Ogaadeen?
Image caption Itoobiya ayaa ku raad joogta saraakiil loo heysto tacaddiyo
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay saal horay uga tirsanaa maamulkii deegaanka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdi Maxamuud Cumar.
Sharci ahaan suurtagal ma tahay in cafis loo fidiyo Cabdi Maxamuud Cumar?
Markii ay dhacday dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar, wuxuu ka mid ahaa saraakiishii baxsatay ee ka carartay Itoobiya.
Image caption Xasan Ismaaciil Ibraahim, oo loo yaqaanno Xasan dheere
Waxaa ninkan lagu eedeynayaa inuu mas'uul ka yahay tacaddiyadii ugu badnaa ee ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan xabsiga caanka ku ahaa xad gudubyada ee loo yaqaanno Jeel Ogaadeen.
Lahaanshaha sawirka GOOGLE EARTH
Arrintan ayaa loo arkaa in ay gacan ka geysandoonto in cadaalad ay helaan dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay Jeel Ogadeen.
Hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in xabsigaas oo Jigjiga ku yaalla uu ahaa meel lagu ciqaabo dadka lagu eedeynayay in ay ka tirsanaayeen ONLF iyo in ay ka fikir duwanaayeen maamulkii hore. Hay'adaha ayaa tilmaamay in tacaddiyo ba'an ay ka dheceen.
Dacwadaha loo heysto Cabdi Maxamuud Cumar
Image caption Cabdi Maxamuud Cumar oo soo muuqday markii koowaad isaga oo askarta hareer socota aysan ahayn kuwa waardiye ka haya, balse ay yihiin kuwa xiraya
Hase yeeshee Ra'isulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo shalay ka hadlayay shir jaraa'id ayaa sheegay in arrinka Cabdi Maxamuud Cumar uu mari doono dariiqa saxda ah ee garsoorka, helina doono maxkamadayn caddaalad ah.
Dr Abiy oo shalay sidoo kale ka hadlay xisbiga TPLF ee gobolka Rigrinya ayaa yiri "TPLF oo kaliya ma ahan dadka isbadalka kasoo horjeeda, ee dhammaan xisbiyada ku jira isbahaysiga tallada haya dad ka mid ah ayaa kasoo horjeeda isbadalka, waxna waan ka qaban doonaa" ayuu yiri Abiy oo u muuqda in markii ugu horeysay uu si toos ah uga hadlayo arrimo aanan shaaca usoo bixin wixii hadda ka horeeyay.
Cabdi Maxamuud Cumar oo weli "majaraha u haya" dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya
Internetka oo dib loogu soo celiyey bariga Itoobiya
Waxaa sidoo kale warbixin taas la mid ah soo saaray hay'addaha xuquuqda aadanaha oo iyagu ku baaqay in caddaalada la horkeeno dadkii ka dambeeyay xadgudubyada.